प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोश पोख्दै कमेडियन आदर्श – मेरो बाउले चलाको स्कुल हेर र तिम्ले चलाको देश हेर, अलिकति पनि लाज लाग्दै ? (भिडियो सहित) – List Khabar
Home / समाचार / प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोश पोख्दै कमेडियन आदर्श – मेरो बाउले चलाको स्कुल हेर र तिम्ले चलाको देश हेर, अलिकति पनि लाज लाग्दै ? (भिडियो सहित)
प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोश पोख्दै कमेडियन आदर्श – मेरो बाउले चलाको स्कुल हेर र तिम्ले चलाको देश हेर, अलिकति पनि लाज लाग्दै ? (भिडियो सहित)
admin3weeks ago समाचार Leaveacomment 83 Views
वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज (एनएमसी) र नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालका कारण आफ्ना बुवाको निधन भएको उनको भनाई छ । एनएमसीका सञ्चालक बसरुद्धिन अन्सारी असाध्यै शक्तिशाली व्यक्ति भएको र उनले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको म्रिगौला प्रत्यारोपणको पैसा तिरेको बताएका छन् । उनै अन्सारीले कलेजको शुल्क र सुविधाको विषयमा प्रश्न उठाउँदा गु न्डा लगाएर विद्यार्थी कु ट् ने गरेको उहाँको आरोप छ ।
Previous को-रोना संक्रमित बिरामिको आँखामा कालो, सेतो र पहेंलो ढुसीको संक्रमण फेला, कसरी जोगिन सकिन्छ ?
Next अस्पताल र औषधी नपाएर कोहि मर्छ भने त्यो मृ’त्यु होइन, ह’त्या हो !